YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, June 05
သေချာတာကတော့ (Indian-Burmese)လို့ခေါ်ရင်တော့ငြင်းမရတာအမှန်ပါ။ ကနေဒါဆိုတာလူ့အခွင့်ရေးနဲ
တရုတ်ကလာတဲ့သူကလည်းမညာပါဖူး..(I am Canadian_Chinese.)
(I am Canadian but my parents are Burmeses.)လို့ပဲပြောပါတယ်။
Burmese-Indian လို့ပြင်ဖတ်ပေးပါ။Canadian-Burmese.....Canadian_Chinese... လက်၇ှိအခြချတဲ့နိုင်ငံနာမည်ကိုအရှေ့မှာထားရပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/05/20120အကြံပြုခြင်း
လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ လက်တွဲကြဖို့ အချိန်တန်ပြီ
၁။ အပြစ်ကင်းမဲ့သော ရခိုင်အမျိုးသမီးငယ် မသီတာထွေးကို ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၌ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သော လူငယ်သုံးဦးက ၂၀၁၂ခု မေလ(၂၈)ရက်တွင် ရက်ရက်စက်စက် အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်လိုက်သည့် သတင်းဆိုးတစ်ရပ်ကို ကြေကွဲဖွယ်ရာ ကြားသိရပါသည်။
၂။ တစ်ဖန်သံတွဲ-ရန်ကုန်ခရီးသည်တင်ကားပေါ်ရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးအပါအဝင် အပြစ်မဲ့ ခရီးသွား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်(၁၀)ဦးနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးကို ၂၀၁၂ခု ဇွန်လ(၃)ရက်နေ့တွင် တောင်ကုတ်မြို့နေရခိုင်လူမျိုးအချို့ကကားပေါ်မှဆွဲချပြီး ရက်ရက်စက်စက် ဝိုင်းဝန်းရိုက်သတ်လိုက်သည့် သတင်းဆိုးတစ်ရပ်ကိုလည်း ကြေကွဲဖွယ်ရာ ထပ်မံကြားသိရပါသည်။
၃။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့က တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အထူးအလေးပေး ဆောင်ရွက်နေသော ယခုကဲ့သို့ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေး ကာလမျိုးတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှုအလျောက် ထိရောက်စွာ အရေးယူရေးဖြစ်ရမည့်အစား တစ်နိုင်ငံလုံးသို့လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းများပြန့်နှံ့လာမည့်အလားအလာများပိုမိုကြီးထွားလာသည်ကို စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ တွေ့မြင်လာရသည်။
၄။ ထို့ကြောင့် မလိုလားအပ်သောပြသနာများ ပိုမို မကြီးထွားလာရေးအပြင်၊ အလားတူပြသနာများနောက်နောင် မဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် မိမိနည်း မိမိဟန်ဖြင့် သီးခြားဖြေရှင်းနေကြမည့်အစား မြန်မာမွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်များနှင့်ရခိုင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပူးတွဲ
၅။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်များအပါအဝင် အခြားဘာသာစုံ၊ လူမျိုးစုံ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကလည်း ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များ၏ဦးဆောင်မှုကိုခံယူ၍ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဘာသာပေါင်းစုံ၊လူမျိုးပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ထွန်းလာအောင်လုပ်ဆောင်သင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းအလေးအနက် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
Media Contact; ကိုကျော်စွာ +44 782 842 6801(UK) kyawzwa@b-m-a.org
ဒေါ်မော်လီ +1 306 242 4536 Canada law4women@gmail.com;
ရန်ကုန်- ဇွန် ၅
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများနှင့်ပတ်သက်၍ဇွန်လ၅ရက်နေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ တွင် သုံးနှုန်းခဲ့သော အသုံးအနှုန်းအချို့နှင့်ပတ်သက်၍ ဇွန်လ၆ရက်ထုတ်သတင်းစာများတွင် ပြင်ဆင်ဖော်ပြရန်စီစဉ်နေကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲထွဋ်ကသူ၏ ကိုယ်ပိုင်ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာတွင် ဇွန်လ၅ ရက်မွန်းလွဲပိုင်းက ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
ဦးရဲထွဋ်က“သတင်းစာများပါရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းများရဲ့အရေးအသား အချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းကမနက်ဖြန်ထုတ်သတင်းစာများမှာ ပြင်ဆင်ဖော်ပြပေးဖို့ စီစဉ်နေကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။ ဘယ်သူကိုမှ ထိခိုက်နစ်နာစေလိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒမရှိဘဲအရေးအသားမှားယွင်း မှု သက်သက်သာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကို ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးဖို့သူတို့ကိုယ်စား တောင်းပန်ပါတယ်”ဟုရေး သားထားသည်။
ဇွန်လ၅ရက်နေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့အလင်းနှင့်ကြေးမုံသတင်းစာများတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းများတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို “မွတ်ဆလင်ကုလား”ဟုသုံးနှုန်းထားခဲ့ပြီး ထိုသို့သုံးနှုန်းခြင်းကို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက နှစ်သက်ခြင်းမရှိပဲခွဲခြားဆက်ဆံခံရသည်ဟု ထင်မြင်ကြောင်း ပြောကြားကြသည်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီကျေညာချက် ထုတ်ပြန်
နိုင်ငံရေး — June 5, 2012 at 6:11 pm ရမ်းဗြဲ၊ တောင်ကုတ်၊ စစ်တွေ ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး RNDP ကျေညာချက် ထုတ်ပြန် ကျေညာချက်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်သည်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ ဗဟိုဌာနချုပ်၊ စစ်တွေမြို့ သဘောထားကြေငြာချက် အမှတ် (၁/၂၀၁၂) နေ့စွဲ-၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၄) ရက် ၁။ ၂၈. ၅. ၂၀၁၂ နေ့တွင် ဖြစ်ပျက် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ကျောက်နီမော် ကျေးရွာ အုပ်စု၌ ရခိုင် အမျိုးသမီးအား လူမဆန်စွာ မုဒိမ်းပြုကျင့် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန် သတ်ဖြတ် ခံခဲ့ရမှု အပေါ်၊ ရခိုင်တိုင်း ရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ အနေဖြင့် များစွာ စိတ်ထိခိုက် ၀မ်းနည်း ကြေကွဲ ရပါသည်။
ဗဟိုဌာနချုပ်၊ စစ်တွေမြို့ သဘောထားကြေငြာချက် အမှတ် (၂/၂၀၁၂) နေ့စွဲ ၂၀၁၂-ခုနှစ် ဇွန်လ (၄) ရက် ၁။ ၃.၆.၂၀၁၂ နေ့ညနေပိုင်းက စစ်တွေမြို့၊ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းရှေ့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြဿနာ၏ အစမှာစစ် တွေမြို့ စက်ရုံစုရပ်ကွက် (နာဇီဈေး) အခွန်ကောက်ခံ သူအုပ်စုများ၏ ပဋိပက္ခဆက်နွယ်ပြီး “အောင်သန်းဝေ” ဆိုသူ ပျောက်ဆုံးနေမှုအတွက် တိုင်တန်းတောင်းဆို ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပါတီမှ သိရှိခဲ့ရပါသည်။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်လို့မရသလို အမျိုးသားရေးကို စွန့်ပစ်လို့လည်း မရဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ လူဦးရေကို တွက်ကြည့်ပါ။ သူတို့နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ လူဦးရေကို ကြည့်ပါ။ ရခိုင်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကနေ ပြိုဆင်းလာမဲ့ အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်တယ် ဆိုတာ သဘာဝကျတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံရမဲ့ ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက အဲဒီက ပြိုဆင်းလာမဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အရေးကိစ္စကို ဗန်းပြပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို အရေး ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ မှားပါတယ်။ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ လက်လည်း မခံနိုင်ပါဘူး။ အလားတူ ကျွန်တော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ အနေနဲ့က မြန်မာပြည် မှာ နေပြီး၊ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆန်ကိုစားပြီး မြန်မာပြည်မှာ ကြီးတယ်။ အဲဒီအတွက် အမေကို ကျော်ပြီးဒွေးတော်လွမ်းနေစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေရဲ့ စိတ်ပူပန်မှုဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ပူပန်မှုပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ရခိုင်အမျိုးသားတွေဘက်က ရပ်တည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက်မှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံ ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ သန်းပေါင်း ၆၀ သော ပြည်သူတွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက် စဉ်းစားရမှာပါ။ ပထ၀ီဝင်နိုင်ငံရေးအရ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ လူဦးရေ သန်း ၁၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ အိန္ဒိယက တစ်ဘက်၊ တရုတ် က တစ်ဘက် ကြားမှာ ရှိနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားရေး ခံကတုတ်၊ ယဉ်ကျေးမှုခံကတုတ်ကို မပြင်နိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့ ကျွန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ရေစုန်မြောလိမ့်မယ်။ အဲလိုကတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှင်းလင်း ပြတ်သားတဲ့ အတွေးအခေါ်ရှိပြီးသားပါ။ ဒါ လူမျိုးရေးနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ တိုင်းပြည်အတွက် ထားရ မယ့် နိုင်ငံရေး သမားစိတ်ဓါတ်ပဲ
(၅.၆၂၀၁၂)ရက်နေ့ ထုတ်ဝေသည့်သတင်းစာတွင် ဖေါ်ပြချက်များနှင့်ပက်သက်၍ နိုင်ငံသားပြည်သူများအကြားတွင် သဘောထားကွဲလွဲလျက်ရှိပါသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးအနေဖြင့်လည်း သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ တင်ပြပြီး တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ အေးချမ်းစွာဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအနေဖြင့် အစ္စလာမ့်တရားတော်နှင့်အညီ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာ နေထိုင်ကြပါရန်၊ လူစုလူဝေးဖြင့် ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ခြင်းများ ရှောက်ကြဉ်ကြပါရန် အထူးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၁။ အိုလမာ အစ္စလာမ့်သာသနာ့ပညာရှင်များအဖွဲ့ချုပ်
၂။ အစ္စလာမ့်သာသနာရေးရာ ကောင်စီဌာနချုပ်
၃။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မော်လ၀ီအဖွဲ့ချုပ်
၄။ မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်လူငယ်များ(ဘာသာရေး)အဖွဲ့ မ-မ-လ ဌာနချုပ်
၅။ မြန်မာမွတ်စလင်အမျိုးသားရေးရာအဖွဲ့ချုပ် (မ-အ-ဖ)ဌာနချုပ်
တောင်ကုပ်မှာအသတ်ခံရတဲ့ပုံတွေနဲ့ ဆူးလေဘုရားဘေးဗလီရှေ့ ဆန္ဒပြတာကိုဝိုင်းကြည့်ပြီးဝေဖန်နေကြတာပါ။ ဆူးလေဘုရားရဲ့အခြားတဖက်မှာရဲတွေရှိနေပေမဲ့လူစုမခွဲခဲ့ပါဖူး။ ကိုမြအေးတို့ရောက်လာပြီးအခြေအနေကိုဝင်ထိန်းခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီကျေညာချက် ထု...